Mattias Karlsson (SD) wêne: SVT
La daabacay tisdag 2 december 2014 kl 17.21
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa ku dhawaaqay kadib shir-jaraaid oo uu galabta ku qabtay xarunta baarlamanka ee dalka Iswiidhen inuuxisbigu codkiisa siin doono miisaaniyadda garabka midig ee mucaaradka Alliansen, sidaan ku ridi doono dawladda, sida uu sheegay ku simaha hoggaamiyaha xisbiga SD Mattias Karlsson:
- Xaaladda iminka lagu jiro waxay ka dhigan tahay in xisbiga Sverigedemoraterna ey xubnihiisu u codeeyn doonaan berito miisaaniyadda mucaaradka. Middaasi ayay sidoo kale macnaheedu tahay in haddii xisbiyada mucaaradku aaney wax ka badalin ama ka tanaasulin siyaasaddooda soo-galootiga iyo heshiiskii ey la galeen xisbiga Doogga (Miljöpartiet) waxaan sidaa oo kale haddii xaaladdu noqoto aan ridi doonnaa dawlad ay hoggaamiyaan.
Oscar Sjöstedt, af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga SD ayaa furay shirkii jar'aaid oo uu galabta qabtay xisbiga SD, halkaasina oo ey qaadatay muddo 25 daqiiqadood ah in lagu soo ban-dhigo go'aanka uu xisboigoodu gaaray.
Xisbiga SD ayaa sheegay inuu is-barbar-dhig ku sameeyay labada miisaaniyadood ee garabyada bidixda iyo midigta, marka laga reebo miisaaniyaddooda.
"Kolka la isku soo wada duubo waxaan aamin-sannahey in labadan miisaaniyadood ee garabyada bidixda iyo midigtu ey yihiin kuwo dabac-san, sida uu sheegay", säger Sjöstedt.
Xaladda miisaaniyadda dawladda